अत्याधिक भाइरल भइरहेको अभिनेत्री अदा शर्माको यो भिडियोमा के छ ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Dailny NpNews
अत्याधिक भाइरल भइरहेको अभिनेत्री अदा शर्माको यो भिडियोमा के छ ? (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २५, २०७८ समय: १७:१२:००
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेत्री अदा शर्मा फिल्महरूको साथसाथै सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै सक्रिय रहने गर्छिन् । उनी आफ्ना कार्यक्रमहरूका भिडियोहरू फ्यानहरूसँग साझा गर्न बिर्सिदिनन् । अदा शर्माको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल भइरहेको छ ।
भिडियोमा, अभिनेत्री दौडँदै गर्दा अचानक लडेको देखिएको छ । अदा शर्माको भिडियोले यस भिडियोलाई आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम खाताबाट सेयर गरेकी छिन् । अदा शर्माको यो भिडियोमा फ्यानहरूले कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् ।अदा शर्माले भिडियो सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘उनलाई ट्याग गर्नुहोस् जो यस्तै प्रेममा परे । म प्रेममा गएँ र उठें र नाटक गरें केही पनि भएन र भाग्यो ।’ अदा शर्माको भिडियो अहिलेसम्म लाखौंले हेरेका छन् । अदा शर्माको यो भिडियो शुटिङ्ग सेटको भएको बताइएको छ । अदा शर्मा यी दिन दुई फिल्मको शूटिङ्गमा व्यस्त छन् ।
ती मध्ये एउटा शर्ट फिल्म हो र अर्को तेलगु फिल्म भएको बताइएको छ । हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छु कि अदा शर्मा अन्तिम पटक फिल्म ‘कमाण्डो’ मा देखा परेकी थिइन् । अदा शर्माले सन् २००८ सालको हरर फिल्म ‘१९२०’ मा आफ्नो पढाइ सिध्याएपछि बलिउड डेब्यू गरेकी हुन् ।
‘१९२०’ को सफलतापछि अदा शर्माले धेरै फिल्महरूमा काम गरेकी छिन् । अदा ‘हंसी तो फंसी’ फिल्ममा सिद्धार्थ मल्होत्राको केटी साथि र परिणीति चोपडाकी बहिनीको भूमिकामा थिइन् । फिल्ममा शर्माको अभिनयलाई सराहना गरिएको थियो ।(हेर्नुहोस भिडियो)
११७ पटक हेरिएको